"Shumis Badan Ma Ogoli, Mana Doonayo Inuu Gabar Uureeyo" - Gabriel Jesus Hooyadiis | Laacib.net
“Shumis Badan Ma Ogoli, Mana Doonayo Inuu Gabar Uureeyo” – Gabriel Jesus Hooyadiis
September 9, 2019 Balaleti Comments Off on “Shumis Badan Ma Ogoli, Mana Doonayo Inuu Gabar Uureeyo” – Gabriel Jesus Hooyadiis
Xiddiga Manchester City Gabriel Jesus ayaa halis gelinaya carada hooyadiis ka dib markii lagu sawiray markii ugu horeysay gabar saaxiibtiis ah, iyadoo hooyadaasi ay xitaa ogoleyn inuu shumis sameeyo ama dhunkasho.
Waxa uu ku sugnaa dalkiisa Brazil maalmihii la soo dhaafay, waxaana uu bogaga bulshada soo geliyay sawir ay isla galeen isaga iyo saaxiibtiis.
Gabriel ayaa lagu xamanayay inuu la socdo fanaanada reer Brazil kuwaasoo la sheegay inay xiriir hoose lahaayeen in muddo ah.
Ludmilla Oliveira da Silva waa heesaa, waxaana ay ka mid ah gabdhaha ugu caansan dhanka fanka ee dalka Brazil.
Gabriel Jesus ayaa dib ugu soo laabtay Ingariiska shalay oo Axad aheyd, hooyadiis oo lagu magacaabo Vera ayaana dabcan su’aalo ka weydiin doonta wixii uu ku soo sameeyay Brazil.
Vera waxa ay wiilkeeda kula nooshahay Manchester isaga iyo walaalkiis ka weyn si uusan u cidloonin.
Waxa ay sharci u dejisay gabdhaha doonaya inay xiriir la sameeyaan wiilkeeda 22 sanno jir ah.
Vera oo Gabriel ugu yeerta ‘baby’ ayaa wareysi ay siisay warbaahinta Brazil waxa ay ku tiri: “Gabdhaha doonaya inay saaxiib la noqdaan wiilkeyga waa inay u hogaansamaan sharcigeyga. Ma ogoli shumis badan. Haddii ay la joogeyso waa inaysan noqonin mid joogto,
Galmada saaxiibteey ayaa iiga fiican goolkeygii ugu qurxoonaa abid
“Marnaba ma aqbali dooni in wiilkeyga uu xumeeyo qof kale gabdhiisa. Wiil aan aniga dhalay marnaba ma uureynayo qof kale gabdhiisa. Waxaan ka dalbadaa ixtiraam sababtoo ah aniga kaligeey ayaan soo koriyay seddexdooda, Ilaah ayaana igu caawiyay”
Gabriel walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabo Caique ayaa isna u sheegay Yahoo Brazil in hooyadood ay maamusho mushaharka xiddiga Man City.
Waxa uu sheegay in Gabriel Jesus laga mamnuucay khamriga, sigaarka iyo inuu aado goobaha lagu caweeyo.
Caique ayaa yiri: “Laakiin Gabriel markii horeba ma uusan jecleyn inuu caweeyo. Wuxuu jecel yahay inuu qoyskiisa waqti la qaato.”
Gabriel ayaa jirkiisa ku shabadeeyay qoraal uu ku maamusayo hooyadiis: “Talaabo walba aan qaado, wado walba aan raaco, waxaad tahay gacantii i daadiheyneysay, Vera Lucia.”